တရုတ်ကြက်တောင် လွန်းပျံလေ့ကျင့်ရေးစက် B1600 စက်ရုံနှင့် ထုတ်လုပ်သူ |Ismart
ကြက်တောင် လွန်းပျံလေ့ကျင့်ရေးစက် B1600
အားကစားကလပ်များတွင် အချို့သောအားကစားများကို လူနှစ်ဦးအတူတကွလုပ်ဆောင်ကြသော်လည်း တစ်ခါတစ်ရံတွင် ကျွန်ုပ်တို့တစ်ဦးတည်း အားကစားလုပ်လေ့ရှိသောကြောင့် အလိုအလျောက်ဘောလုံးစက်များကို တီထွင်ထုတ်လုပ်ထားပါသည်။အားကစားခန်းမတွင် အသုံးပြုလေ့ရှိသော စက်ကိရိယာဖြစ်သည့် ကြက်တောင်လေ့ကျင့်ရေး သေနတ်ပစ်စက်ကဲ့သို့ပင်။လူတစ်ဦးတည်းသာရှိသည့်အခါ ကစားရန် သို့မဟုတ် လေ့ကျင့်မှုပြုလုပ်ရန် ဤလေ့ကျင့်ရေးကိရိယာကို အသုံးပြုခြင်းသည် ကောင်းမွန်ပါသည်။
ပစ္စည်းအမည်- ကြက်တောင်ဝတ်စက် B1600 စက်စွမ်းအား- 120 W
ထုတ်ကုန်အရွယ်အစား 115*115*250 CM (အမြင့်ချိန်ညှိနိုင်သည်) အစိတ်အပိုင်းများ- အဝေးထိန်းခလုတ်၊ အားသွင်းကိရိယာ၊ ပါဝါကြိုး
လျှပ်စစ်- 110V-240V တွင် AC သည် မတူညီသောနိုင်ငံများနှင့် ကိုက်ညီပါသည်။ အကြိမ်ရေ- ဘောလုံးတစ်ခုလျှင် 1.2-6S/
ဘက်ထရီ: ဘက်ထရီ -DC 12V ဘောလုံးစွမ်းရည်- 180 pcs
ထုတ်ကုန် အသားတင် အလေးချိန် 30 KGS ဘက်ထရီ (ပြင်ပ): လေးနာရီခန့်
ထုပ်ပိုးအရွယ်အစား (3 ctns): 34*26*152cm/68*34*38cm/58*53*51cm
စုစုပေါင်း အလေးချိန် ထုပ်ပိုးမှု 55 KGS တွင် အမြင့်ထောင့်- -၁၈ မှ ၃၅ ဒီဂရီ
အကောင်းဆုံး ကြက်တောင်အစာကျွေးစက် B1600 မော်ဒယ်ကို သင့်အား အကြံပြုလိုပါသည်။
1. ရွေးချယ်စရာများအတွက် အနက်ရောင်နှင့် အနီရောင်များ ရှိပါသည်။
2. ၎င်းသည်ဤမော်ဒယ်အတွက်မူလဘတ္ထရီပါ ၀ င်သည်၊ သုံးစွဲသူများက၎င်းကိုမလိုလားပါကဘက်ထရီမပါဘဲတင်ပို့နိုင်သည်။
3. စက်ပါ ၀ င်သည် - ဘောလုံးကိုင်ဆောင်သူ; ပင်မစက်; ပစ်ခတ်မှုဘီး၊ ကော်လံရုတ်သိမ်းခြင်း;တယ်လီစကုပ်ပုံသေခလုတ်၊ဘရိတ်များဖြင့် ရွေ့လျားနေသောဘီးများ၊
4. တင်ပို့ရန် စက်နှင့်အတူ ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ- Lithium အားသွင်းနိုင်သော ဘက်ထရီ၊ အားသွင်းကိရိယာ၊အဝေးထိန်းခလုတ်;လွန်းပျံငှက်ကိုင်ဆောင်သူ၏ စတုရန်းပင်၊ဆဋ္ဌဂံလိမ်ဖဲ့;အဝေးထိန်း ဘက်ထရီများ;AC ပါဝါကြိုး;DC ပါဝါကြိုး;
5. B1600 ကြက်တောင် လွန်းပျံလေ့ကျင့်ရေးစက်အတွက် ပြသသည့် အဝေးထိန်း ညွှန်ကြားချက်
အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း B1600 လွန်းပျံဝန်ဆောင်မှုပေးသည့်စက်၏ ကြိုတင်သတ်မှတ်ထားသော လေ့ကျင့်ခန်းများ။
2. လိုင်းနှစ်ခုလေ့ကျင့်မှုနှင့် ကျပန်းလေ့ကျင့်မှု၊
3. ဒေါင်လိုက် နှင့် အလျားလိုက် တုန်ခါမှု လေ့ကျင့်မှု;
4. လက်ဝါးကပ်တိုင်လေ့ကျင့်ရေးမုဒ် နှစ်မျိုး၊
ကြက်တောင်ရိုက် ဝန်ဆောင်မှုပေးသည့် စက်များအတွက် ကျွန်ုပ်တို့ အာမခံ ၂ နှစ် ရှိသည်။
ပို့ဆောင်မှုအတွက် အလွန်လုံခြုံသော ထုပ်ပိုးမှု။
siboasi ကြက်တောင်ရိုက်လေ့ကျင့်ရေးစက်များအတွက် အသုံးပြုသူများ၏ မှတ်ချက်များကို အောက်တွင်ကြည့်ရှုပါ။
ယခင်- ကြက်တောင်ရိုက်စက် S4025
နောက်တစ်ခု: အဝေးထိန်းစနစ်ဖြင့် ဘတ်စကက်ဘောလေ့ကျင့်ရေးစက်
High end S8025 siboasi ကြက်တောင်ရိုက်လေ့ကျင့်မှု...
စျေးနှုန်းချိုသာသော S2025 ကြက်တောင် လွန်းပျံလေ့ကျင့်...
H7 ကြက်တောင်လေ့ကျင့်ရေးစက်ကို ရောင်းချပေးနေပါပြီ။
Mobile A ဖြင့် Siboasi ကြက်တောင်အစာကျွေးစက်...
စျေးသက်သက်သာသာ ကြက်တောင်လေ့ကျင့်ရေးစက် အသစ်ရောက်ပါတယ်...